Sudan oo mar kale ku eedeeysay Khalifa Xaftar inuu taageero maleeshiyada hubaysan ee Darfur - Horn Future
Sudan oo mar kale ku eedeeysay Khalifa Xaftar inuu taageero maleeshiyada hubaysan ee Darfur
Khartoum(Horn Future)-Xukuumadda Sudan ayaa mar kale ku eedeeysay hogaamiyaha hawlgabka ah general Khalifa Xaftar inuu taageero dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Sudan ee ka dagaalama gobolka Darfur.
Afhayeenka rasmiga ah ee xukumuuadda Sudan Axmed Bilal ayaa sheegay in waxa Xafter uu siinayo dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Sudan ay tahay mid uu abaal marin uga dhigayo ka qaybgalkooga dagaalka Libya ka socda.
Waxa sidoo kale sarkaalkani uu ku tilmaamay taageeradan sii socoshada habkii uu ku kici jiray kaligii-taliyihii hore ee dalkan Mucammar Qaddafi si wareer loogu galiyo ammaanka dalka Sudan oo uu ku taageeri jiray kooxaha hubaysan ee kasoo horjeeda.
Ciidanka Sudan ayaa waxa uu sheegay bishii la soo dhaafay in uu ka hortaggay kooxaha hubaysan oo ka soo galay gobolka Darfur dhinaca soohdimaha Libya iyo Koonfurta Sudan wakhti isku mid ah.
Waxa sido kale ciidankan Sudan uu tilmaamay isla wakhtigaas in hubkii laga qabsaday kooxahan hubaysan qaybo kamid ah ay ahaayeen baabuurta gaashaaman ee ay leeyihiin ciidamada Masar kuwaas oo loo soo bandhigay warbaahinta caalamka.
Dhiniciisa madaxweynaha Sudan Cumar al-Bashir ayaa sheegay bil ka hor in kooxaha hubaysan ee Sudan oo uu ku tilmaamay “calooshooda u shaqaystayaal” ay ka barbar dagaalamann maleeshiyada daacada u ah hogaamiyahan hawlgabka ah Khalifa Xaftar.
Khalifa Xaftar ayaa waxa uu taageero ciidan iyo mid dhaqaal uu ka helaa qoyska maamula Imaaraadka Carabta ee aala Nahyaan iyo digaaga Sisi ee afgambiga ka gaystay dalka Masar.
Waxa qoyska maamula Imaaraadka Carabta si qaawan oo foolxun ugu lug leeyahay shirqoolada lagula dagaalamayo dalalka ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyada is-badil doonka ah ee ay wadaan bulshooyinka dalalka Tunisia,Yemen,Syria iyo Masar oo ay ku bixiyeen shirqoolkii afgambiga in ka badan (40$ billion) milyaar oo dollar.
Waxa sido kale qoyskani uu taageero siiyaa kaligii-taliyiihi talada laga siibay ee dalka Yemen oo wiil uu dhalay si xor ah ugu nool yahay magaalada Abu Dhabi xilli ciidamada daacada u ah aabihii iyo argagixisada shiicada xuutiyiintu ay xasuuq ku hayaan bulshada Yemen oo masiibada dagaalkani uu sababay ay seejisay nolosha asaasiga ah marka lagu cudurka shuban-biyoodka ee dhawaan ka dilaacay oo ay ku dhinteen kun qof sida lagu sheegay tirkoobkii u dambeeyay ee Qaramada Midoobay.
Dhinaca kale qoyskan ayaa lagu eedeeyay inuu taageero golaha cusub ee lagaga dhawaaqay dhawaanta koonfurta Yemen oo isagu taageero ka helay dhaqdhaqaaqa koonfureed ee u gucleeynaya gooni u goosadka koonfurta Yemen.
« Turkey:71 diyaaradood oo siday raashin ayaa gaadhay Qadar tan iyo bilowgii dhibaatada	» Khudaarta India oo si qarsoodi ah loogu buufiyo kimiko waxyeello u gaysata kalyaha+ daawo